ဗျူရို Veritas ၏ QSSE မန်နေဂျာStéphanieမြင့်တက်လာသည်
Posted by ကို Tranquillus |3ပင်လယ်, 2021 | web ပေါ်မှာ
ဒေသတွင်းရှိအကျော်ကြားဆုံးစာရင်းစစ်ရုံးတစ်ခုဖြစ်သည့် QHSE အတွေ့အကြုံရှိသူအဆင့်မှ QSSE မန်နေဂျာအဖြစ်သို့ပြောင်းရွှေ့ရန်လေးနှစ်မပြည့်မှီအချိန်က! IFOCOP လေ့လာသင်ယူသူဟောင်းStéphanieကသူမ၏အတွေ့အကြုံကိုအကြံဥာဏ်ကောင်းများပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့အားသဘောတူခဲ့သည်။
သူမသည်အလုပ်များသောမိန်းကလေးတစ် ဦး ဖြစ်သော်လည်းစိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်ပြည့်ဝမှုနှင့်ပြည့်နှက်နေပြီးကျွန်ုပ်တို့၏မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်သူမအလုပ်များနေသည့်နေ့ကိုအချိန်ပေးရန်သဘောတူခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မှာသူမအံ့ journey ဖွယ်ကောင်းသောခရီးကိုပြန်ပြောင်းကြည့်ခြင်းနှင့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းသူမအနေဖြင့်ပြင်သစ်နိုင်ငံ၏ဂုဏ်သတင်းဆုံးသောစာရင်းစစ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သော Bureau Veritas တွင်အထူးနေရာတစ်ခုမည်သို့ဖန်တီးနိုင်ခဲ့သည်ကိုနားလည်ရန်ဖြစ်သည်။ အဖြေ « အလုပ်၊ နည်းစနစ်နှင့်အခြားအရာအားလုံးထက်၊ သင်ဘဝပြinနာရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးအရာအားလုံးကိုသင်ယူနိုင်သည်ဟုခံယူထားပါသည် "။ သေချာတာပေါ့၊ ဒါပေမယ့်ဒီကနေငါးနှစ်အကွာမှာလူ ၃၀၀ ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုရဲ့တာ ၀ န်ကိုယူဖို့သင်တန်းတွေကိုပြန်ပြီးသင်တန်းပေးတာက ... ကွာဟမှုတစ်ခုပဲ! သို့မဟုတ်လေးနည်းနည်းမျှသောခုန်ခြင်း၊ သူမ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ IFOCOP လေ့ကျင့်ရေး၏သင်တန်းအနေဖြင့် ၄ လအလုပ်သင်အပြီးတွင်သူမ၏လက်ရှိရာထူးတွင်ပါဝင်ခဲ့သူStéphanieမှပြောကြားခဲ့သည်။ သူမကပြောပြသည်
ဗျူရို Veritas ၏ QSSE မန်နေဂျာStéphanieမြင့်တက်လာသည် ဇူလိုင်လ 10th, 2021Tranquillus
ဖတ်ရန် 18 ရာစု: ဉာဏ်အလင်းအတွက်တိုက်ပွဲ
လွန်ခဲ့သောစုပေါင်းအသွင်ကူးပြောင်းမှုများ - သင်၏ ၀ န်ထမ်းများအားပြန်လည်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးမှုကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းရန်နှင့်ပံ့ပိုးပေးရန်သင်တန်းအသစ်
အောက်ပါအကြီးတန်းအလုပ်အမှုဆောင်: အရည်အသွေးစုစုပေါင်းစံ3မှဘာသာရပ်
Print On Demand: ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရင်မေးရန်မေးခွန်း ၁၀ ခု!
အာဖရိက အမွေအနှစ်များ၏ စိန်ခေါ်မှုများနှင့် အမြင်များ